Manao finday miaraka amin'ny tananao
Ny findain'ny finday ho an'ny ankizy dia amidy amin'ny lafiny maro, fa ny vidin'ny kilalao fanabeazana toy izany dia avo avo. Ankoatr'izany dia tsy voatery foana ny misafidy safidy mety ho an'ilay zaza. Ny findain'ny ankizy ao amin'ny fandoavana ny zaza vao teraka dia azo atao amin'ny tanany avy amin'ny fitaovana izay hita ao amin'ny trano tsirairay. Fotoana be dia be tsy azony. Amin'ity kilasy maoderina ity dia hilaza aminareo ny fomba hanaovana ny finday sy ny tompona finday ho azy.
kitapo hazo (8x8 cm);
Takelaka efatra misy lavaka mitovy amin'ny boribory boribory;
mahatsiaro loko isan-karazany;
Andao hanomboka amin'ny famokarana ny tompona fahazoan-dàlana ho an'ny finday. Mba hanaovana izany, dia misy lavaka boribory eo amin'ny tsipiky ny diagonaly eo amin'ny endriky ny tarehin'ny kibay. Eo amin'ny tarehimarika ambony dia manao lavaka kely ho an'ny tohotra, ary avy eo dia mihidy.
Any amin'ny lalamby tsirairay, fara-fahakeliny 2-3 santimetatra amin'ny farany, dia manofa lavaka kely iray izay ahafahanao manisy tady. Rehefa tapitra ny tady dia aforeto ny knot. Dia asio lavaka amin'ny lavaka ao amin'ny kibay. Vangio amin'ny vodiny ny tendron'izy ireo mba hijanonan'ny lamosina.
Apetraho amin'ny loko mety tsara ny tompon'ny fahazoan-doha ary avelao hena amin'ny fanantonana azy amin'ny alàlan'ny fihokoana. Hatramin'ny nandefasan'ny finday any amin'ny efitrano fivorian'ny ankizy dia mifidiana safidy ho an'ny loko zaza.
Fotoana hanombohana jiro kilalao. Amin'ny raharahanay, dia rahona sy baolina miaraka amin'ny harona. Esory roa ny tapakila varimbazaha, satria ny kilalao tsirairay dia misy fizarana roa. Ampiasao ireo kilalao isan-karazany, arotsaho ny kilalao, ary asio izy ireo, ary apetraho ny lavaka ho an'ny filler avy etsy ambany.
Mba hamerenana mafy ny tady, afatory kely ny plastika kely amin'ny farany, ampidiro ao anaty kilalao ary asio lavaka.
Toy izany ihany koa ny kodiaran'ny rahona, ary afatotra amin'ny tadiny amin'ny balaonina. Eo amin'ny tranga misy antsika, efatra amin'ireo fananganana an-tsisintany dia misy balona iray sy rahona iray, ary ny santimetatra (ny fahadimy) - ny baolina roa, eo anelanelan'ny misy ny rahona.
Mbola mitohy ny famaranana ny tendron'ireo tady ho any amin'ny lavaka eo amin'ny paosin'ny tompon'ny fahazoan-dalana, ary ampidiriny ny fihodinan'ny foibe. Feno telefaona mahafinaritra ho an'ny zazakely izay azo ampiasaina ao anaty kabine kely iray efa vonona!
Azonao atao koa ny manao fepetra amin'ny tananao.
Bookmarks for boky
Fabric "manidina" - famaritana
Ahoana ny fomba hanaovana bandy?
Ahoana ny fomba hanamboarana alika amin'ny taratasy - kilasy maoderina mitaiza amin'ny sary
Wisteria avy amorondrianana - kilasy Master
Akanjo maotina amin'ny tanana manokana
Fiaramanidina avy amin'ny ala maitso
Mitsangàna amin'ny antsy miaraka amin'ny tananao
Ahoana ny fomba hamolavolana tavoahangy champagne?
Akanjo vita amin'ny fitaovana namboarina
Ahoana no hamoronana boky?
Etiopia - trano fandraisam-bahiny
Inona no lamaody tsara indrindra?
Ahoana ny fisafidianana ny mpidoroka amin'ny fampiasana trano?
Fanentanana ny asa asa
Fennel - toetra mahasoa
Charlize Theron dia niresaka momba ilay tantara miaraka amin'ny Halle Berry namany
Sakafo avy amin'ny kibon'ny akoho - loharanon-tsakafo maromaro ho an'ny sakafo isan-karazany
Vitamina ho an'ny fitomboan'ny volo
Cheryl Cole sy Liam Payne dia akaiky kokoa ny fizarana
Ahoana no fomba fitafiana zaza vao teraka any an-trano?
Chokeberry - ireo toetra amam-pitsaboana izay tsy fantatrao
Toeram-pandrefesana ho an'ny biriky
Nipoaka ilay sambokely
Ny kafe tsy misy kafe dia tsara sy ratsy